Numeri muchiRussia: manyorerwo azvo uye mataurirwo
Russian nhamba uye madudziro
Russian iri rimi Yakakurumbira kwazvo Indo-European inotaurwa munyika dzinoverengeka dzeEurope dzakadai seRussia, Kazakhstan, Belarus neKyrgyzstan. Parizvino pane vanhu vangangosvika mamirioni gumi nemazana masere nematanhatu vanotaura nekugona mutauro uyu. Iyo Cyrillic uye Latin alphabet inogona kushandiswa kunyora Russian.
Kuti udzidze chiRussian zviri nyore, zvakakosha kuti iwe uzive mavara eCyrillic, ayo ane zviratidzo makumi matatu nematatu, ndiko kuti, mamwe mabhii matanhatu kupfuura mavara echiLatin anoshandiswa mumutauro wechiSpanish.
Imwe yemabhenefiti ekuziva mavara echiCyrillic ndeyekuti iwe uchave nekwanisi yekudzidzira nyore manhamba uye zvimwe zvakakosha zvemutauro wechiRussia.
1 Dzidza iwo manhamba muRussia
1.1 Mitemo mikuru inoenderana nekuverengwa kwemutauro weRussia
Dzidza iwo manhamba muRussia
Muchikamu chino chakakosha iwe unozodzidza mitemo yenhamba dzeRussia, mataurirwo avo uye girama. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti kudzidza idzi nhamba kwakakosha zvakanyanya nekuti zvinoshandiswa mune dzese hurukuro dzezuva nezuva uye zviitiko zvevanhu vane chiRussian semutauro wavo.
Kuti udzidze nhamba dzeRussia nenzira kwayo zvakakosha kuti iwe uve nemirairo yakanakisa yegirama uye madudziro uye uteedzere iyo mitemo ine chekuita nenhamba. Heino diki rekubiridzira iro raunogona kurodha pasi nenhamba muRussia kubva 1 kusvika 10.
Mitemo mikuru inoenderana nekuverengwa kwemutauro weRussia
1. Iwo manhamba kubva zero kusvika mapfumbamwe anozivikanwa nekuve ne zita chairo:
2. Kuti ugadzire makumi zvakakosha kuwedzera izwi ne gumi kana десят, gara uchitsvaga mushure memunhu wakawanda kuti uwane huwandu hwakakodzera mumakumi.
90 - девяносто (chinonosto)
3. Mune manhamba anosanganisira gumi nerimwe kana gumi nepfumbamwe, iwo manhamba anoumbwa anogara achiumbwa nemutsara wechigumi kana (надцать, nadcatʹ), pasina kushandisa nzvimbo
4. Kugadzira manhamba anoumbwa kubva pamakumi maviri nerimwe kusvika makumi mapfumbamwe, gumi nemaviri rinofanirwa kushandiswa, uyezve chikamu chinopatsanurwa nenzvimbo.
Muenzaniso wehuwandu hwesanganiswa unotevera:
5. Kuti ugadzire mazana, unofanira kutanga waisa uwandu hunowanda pamberi pemutsara wezana, unogara uchitora zvakasiyana.
100 сто (sto): cien
200dvести (dvyé-sti) mazana maviri
300триста (tr-sta) mazana matatu
400 четыреста (chye-tý-rye-sta) mazana mana
500 пятьсот (pyet-sót) mazana mashanu
600 шестьсот (shes-sót) mazana matanhatu
700 семьсот (syem-sót) mazana manomwe
800восемьсот (va-syem-sót) mazana masere
900девятсот - (dhayi-vyet-sót) mazana mapfumbamwe
1000 тысяча (tý-sya-cha) chiuru
6. Kuumba zviuru zvakakosha kugara uchiisa nhamba yekuwedzera pamberi pemutsara wechiuru. (тысяча, tysâča), iyo inogara ichitora pane imwe fomu kana pakawanzwa maviri, matatu, uye mana anoshandiswa.
Semuenzaniso wezviuru muchiverengero mumutauro weRussia:
1 000 - тысяча (tysâča) zviuru
2 000 две тысячи (dve tysâči) zviuru zviviri
Zviuru zvitatu zvemakiromita zviuru zvitatu
Zviuru zvina zvemazana ezviuru nezviuru zvina
5 000 пять тысяч (pâtʹ tysâč) zviuru zvishanu
6 шесть тысяч (šestʹ tysâč) zviuru zvitanhatu
7 семь тысяч (semʹ tysâč) zviuru zvinomwe
8 восемь тысяч (vosemʹ tysâč) zviuru zvisere
9 девять тысяч (devâtʹ tysâč) zviuru zvipfumbamwe
7. Mitemo yenhamba muchiRussia inotsanangura izvozvo kana nhamba ichinzi inoumbwa, zviuru zvinofanirwa kutaurwa kana kutaurwa pamberi pemazana, uye mazana pamberi pemakumi, uye makumi pamberi payo.
Semuenzaniso wekuverenga nenhamba dzakaunganidzwa:
8. Panyaya yezwi miriyoni миллион (mamirioni) unofanirwa kushandisa chirevo chebhiriyoni kana миллиард (milliard).
Mukati mehuwandu hweRussia unogona zvakare kuwana manhamba ekuverengera ayo anoratidza chinzvimbo chechinhu mune zvakateedzana zvakateedzana, semuenzaniso: chekutanga, chechipiri, nezvimwe.
Rondedzero yenhamba dzenhamba dzakanakisa kufarira
kutanga pyerviy первый
wechipiri vtoroy второй
chechitatu kuyedza третий
yechina chyetvyertiy четвертый
yechishanu pyatiy пятый
wechitanhatu shyestoy шестой
yechinomwe syedʲmoy седьмой
vasere vosʲmoy восьмой
wepfumbamwe dyevyatiy девятый
yegumi edyutiyati десятый
regumi nerimwe odinnadtzatiy одиннадцатый
yegumi nembiri dvyenadtzatiy двенадцатый
regumi nematatu trinadtzatiy тринадцатый
yegumi nemana chyetirnadtzatiy четырнадцатый
regumi neshanu pyatnadtzatiy пятнадцатый
chegumi nematanhatu shyestnadtzatiy шестнадцатый
yegumi nemanomwe syemnadtzatiy семнадцатый
yegumi nemasere vosyemnadtzatiy восемнадцатый
regumi nepfumbamwe dyevyatnadtzatiy девятнадцатый
wemakumi maviri dvadtzatiy двадцатый
kamwe mudzi раз
kaviri dvaʐiti дважды
Izvi zvave zvirizvo, tinovimba makafarira, kuti makadzidza manhamba muchiRussian uye tobva tazopedzisira nevhidhiyo maunoteerera mataurirwo akakodzera kubva kune veko vatauri vemutauro uyu:
Categories Mitauro, Russian Kubatikiti kufamba
Chinese manhamba kubva 1 kusvika 100
kudzidziswa » Mitauro » Russian » Russian nhamba uye madudziro